Indlela Lungisa iPhone Ayikwazi Xhuma iTunes? - Ungakwenza Kanjani
Ngezinye izikhathi lapho uzama ukuxhuma iPhone yakho ne-iTunes ezinye izingqinamba kungenzeka. Kuzovela umyalezo othi 'Ayikwazi ukuxhuma i-iPhone ku-iTunes'. Lokhu kungaba inkinga yokuxhumeka kwangaphandle noma inkinga yesoftware. Ngabe ubhekene nenkinga efanayo? Ake sibheke izixazululo ezahlukahlukene zale nkinga yokuxhuma.
Kunezikhathi ezithile lapho i-iPhone yakho ingeke ixhumeke ku-iTunes ku-Mac noma kwi-PC. Ezinye zalezi zinkinga kulula kakhulu ukuzilungisa kanti ezinye zithatha izinyathelo ezikhethekile ukuzilungisa. Izizathu zalolu daba zingahluka esimweni ngasinye. Kulesi sihloko, sizobheka ezinye izingqinamba zomhlaba jikelele nezingafaniyo zombili i-PC neMac.
Khombisa isithonjana sephesenti le-Battery ku-iPhone 12
Ungazivala Kanjani Izinhlelo Zokusebenza ku-iPhone 12?
Lungisa i-iPhone Ayikwazi Ukuxhuma ku-iTunes - Izindlela Eziningi
1. Hlola ikhebula lakho lombani
Izikhathi eziningi inkinga ingaba ngentambo yakho yokukhanyisa uqobo hhayi i-iPhone yakho. Sebenzisa ikhebuli ehlukile bese uhlola ukuxhumana. Uma ixhumeka ngentambo entsha, ingahle ilimale. Noma uma usebenzisa ikhebula le-USB lomuntu wesithathu esikhundleni sekhebula le-OEM langempela, kungadala izingqinamba zokuhambisana.
2. Hlola imbobo yakho ye-USB
Isikhathi esiningi kungaba khona i-gunk ethekwini le-USB okufanele lisuswe ukuqala ukuxhumana okufanele. Kuyinkinga elula engaxazululwa ngokushesha. Qiniseka ukuthi isesimweni esihle bese uzama ukuxhuma futhi
3. Hlola inethiwekhi yakho
Kungabonakala kusobala kepha kaningi ama-iTunes awaxhumi kudatha yeselula. Ngakho-ke uma ukuxhumeka kudlula nge-Wi-Fi, kufanele kuguqulwe kumenyu yezilungiselelo. Kwesinye isikhathi kungaba ukuxhumana kwenethiwekhi okuhamba kancane. Uma kunjalo, linda isikhashana bese uzama ukuxhuma futhi.
4. Buyekeza i-Apple USB Driver
Uma kungenzeka ungafaki noma uvuselele i-Apple USB Driver ku-PC yakho, kungenzeka kakhulu ukuthi i-iPhone ingaxhumi ku-iTunes.
Xhuma kabusha i-iPhone yakho ku-PC
Qhafaza kwesokudla kunkinobho yeWindows bese uthepha kuMphathi wedivayisi
Manje usungathola noma yimaphi amadivayisi aphathekayo. Sesha i-iPhone yakho, chofoza kuyo bese ukhetha i-Update Driver
Chofoza ku-'Sesha ngokuzenzakalela ukuthola isoftware yomshayeli ebuyekeziwe '
Uma kungekho ezinye izibuyekezo ezitholakalayo, isibuyekezo siqedile
Manje usungaqala kabusha i-PC yakho bese uyixhuma ku-iPhone
5. Qala kabusha i-iPhone yakho
Kaningi kunokuba nokuphahlazeka kwesoftware encane ngenxa yokuthi ukuxhumana akuphumelelanga. Ukuqalisa kabusha i-iPhone yakho kuzoxazulula ukuphahlazeka okulula kwesoftware okunciphisa inqubo.Ukuze uqale kabusha ifoni yakho, cindezela isikhathi eside inkinobho yamandla bese uslayida amandla we. Lokhu kungenzeka ukuxazulula inkinga yakho.
6. Buyekeza isoftware yakho ye-iPhone
Uma kukhona noma yisiphi isibuyekezo esisha esitholakalayo se-iPhone yakho, kunamathuba okuthi i-iPhone yakho ibe nezinkinga zokuxhuma. Ngakho-ke hlola ukuthi ngabe kukhona yini ukuvuselelwa okutholakalayo.
Chofoza kuthebhu 'Okujwayelekile'
Chofoza kusibuyekezo sesoftware
Uma kukhona noma yikuphi ukuvuselelwa okutholakalayo, kuzokhonjiswa bese inketho yokuvuselela izotholakala ukuthinta isibuyekezo.
Uma i-iPhone yakho isesikhathini, ngeke ibe khona inketho etholakalayo yokuvuselela isoftware yakho.
7. Buyekeza iTunes ku-PC yakho
Ukubuyekeza i-iTunes yisinyathelo esisodwa okumele ukwenze uma ubhekene nanoma yiziphi izinkinga. Iya kumenyu yakho yamawindows bese uhlola noma isiphi isibuyekezo se-Apple software. Uma kukhona izibuyekezo ezitholakalayo, ikhompyutha yakho izoyikhombisa futhi ungayibuyekeza. Uma kungekho izibuyekezo ezitholakalayo. Lokhu kuxazulula noma yiziphi izinkinga zokuhambisana nezinhlobo ezahlukahlukene zesoftware.
Faka kabusha i-iTunes kwi-PC yakho -
Uma izibuyekezo zingasizi ekuxazululeni inkinga, kungahle ukhiphe i-iTunes kwikhompyutha yakho. Ukukhipha uhlelo:
Vula i-Run Prompt ngokuchofoza ukhiye we-windows kukhibhodi yakho
Thayipha 'control approx.cpl' bese uthepha ukungena
Manje imenyu yohlelo izovulwa, skrolela phansi, thepha ku-iTunes bese ukhipha
Khipha enye i-software ehlobene ye-Apple
Bese ulanda iTunes nge ngokuchofoza lapha .
Bese uqala kabusha i-PC yakho bese ufaka i-iTunes. Noma vele unqamule i-iPhone yakho bese uyazama futhi.
Khubaza imikhawulo -
Uma uqala ukuxhuma i-iPhone yakho kwi-PC noma kwi-Mac, icela imvume yokuthembela kudivayisi. Uma uvimbe i-iPhone ekuthembeni awukwazi ukufinyelela ku-iTunes. Susa yonke imikhawulo yabazali bese uzama ukuxhuma futhi.
Ukuze ususe imikhawulo yabazali
Iya ku-Screen Time bese uthepha Imikhawulo yokuqukethwe nobumfihlo
Bese Khubaza imikhawulo
Buyekeza iWindows -
Isinyathelo sokugcina sokudlula ku-PC yakho ukubheka noma yikuphi ukuvuselelwa kwamawindows okutholakala uma ukubuyekeza i-iTunes kungalungisanga ukuxazulula inkinga.
Vuselela iMac -
Njengokubuyekeza i-iPhone yakho, ukuhlola izibuyekezo ze-Mac iOS kubaluleke kakhulu. Ungabuyekeza iMac iOS nge
Thepha kumenyu ye-Apple ku-Mac
Chofoza kunketho ye-'software '
Uma kukhona izibuyekezo ezitholakalayo, ungabuyekeza ngaphandle kwalokho isoftware yakho isesikhathini.
Ungaxhuma kanjani i-iPhone yakho ku-Apple TV?
Kunezici eziningi okufanele uzicabangele ngenkathi uxhuma i-iPhone yakho ku-Apple TV yakho. Uma ukuxhumeka kungaphumeleli, kunezinto ezimbalwa okufanele uzame.
Setha idethi nesikhathi esifanele
Buyekeza isoftware yakho ye-Apple TV
Hlola ukuxhumeka kwakho kwe-inthanethi
Lezi ezinye izinkinga ongazixazulula zisuka ekhaya lakho. Noma kunjalo, uma ungakwazi ukuxhuma i-Apple TV ne-iPhone, ungahle uthande ukuxhumana nezinsizakalo zamakhasimende.
Inkinga nge 'Ayikwazi ukuxhuma i-iPhone ku-iTunes' kungaba ngenxa yezici eziningi. Kusuka ezinkingeni zenethiwekhi kuya kuzibuyekezo zesoftware, kungaba nezici ezahlukahlukene ezinomthelela ekuxazululeni inkinga. Zama izixazululo ezingenhla uma ubhekene nenkinga yokuxhuma i-iPhone yakho ne-iTunes. Uma noma iyiphi yalezi zindlela ezingenhla ingasebenzi, indlela yokugcina kuzoba ukusetha kabusha i-iPhone yakho. Uma inkinga iku-software ye-iPhone uqobo, ingaxazululwa kuphela ngokusetha kabusha kusuka ekuqaleni. Lokhu nakanjani kuzosusa yonke idatha kusuka efonini yakho kepha uma lokhu kuyindlela yakho yokugcina ungadlulisela yonke idatha kwenye idivayisi bese usetha kabusha i-iPhone yakho.